Vaovao - Ny tombony azo avy amin'ny guardrail vy zinc sy ny guardrails hafa
Ny tombony amin'ny zinc vy guardrail sy ny guardrails hafa
Zinc vy guardrail dia manondro ny fampiasana ny zinc firaka fitaovana ho an'ny faritra samy hafa, amin'ny samy hafa Functional fefy railings, noho ny taty aoriana dia tsaboina amin'ny electrostatic famafazana ambonin'ny sosona, ka manana ny tombony ny ambony * ambaratonga, avo hamafin'ny, tsara tarehy, mamirapiratra. loko, sns, dia lasa vokatra mahazatra ampiasaina amin'ny vondrom-piarahamonina fonenana, orinasa sy oniversite, fifamoivoizana eny an-dalana, sns.. Ny guardrail nentim-paharazana mampiasa fitaovana vy, dia mila mampiasa ny teknolojian'ny welding sy ny dingana hafa, ary ny lamba dia malefaka, mora ny harafesina, loko tokana. Zinc vy lavarangana guardrail ** mba hamahana ny tsy fahampian'ny guardrail nentim-paharazana, ary ny vidiny * antonony, lasa ny nentim-paharazana isan-karazany guardrail fitaovana hafa vokatra.
(1), fiarovana *: ny fampiasana avo * ambaratonga ny zinc firaka, taorian'ny T5 hafanana fitsaboana niforona, ary taorian'ny tsy manam-paharoa famolavolana, iray namorona, weld-maimaim-poana, ny ankapobeny hery nitombo.
(2), aesthetics: endrika mirindra, feo malefaka, afaka mampifanaraka ny tontolo manodidina, afaka mifangaro amin'ny tanàn-dehibe maoderina sy ny tontolo voajanahary, mamela anao milomano ao anatiny.
(3), Shu* firaisana ara-nofo: mijery ny lavitra, haingon-trano hatsaran-tarehy, mba hanome anao aina *, azo antoka * sehatra.
(4), azo ampiharina: ny etỳ ambonin'ny dia tsaboina amin'ny alalan'ny dingana manokana mba hamoronana maharitra sarimihetsika fiarovana, malama sy fisaka, tsy misy harafesina, mora diovina, tsy misy fikojakojana.
(5), toetrandro fanoherana: ny vokatra miaraka amin'ny aluminium firaka toetra, ny ambonin'ny ary avy eo ny fitsaboana manokana, ka na inona na inona ny fahalotoan'ny rivotra ao an-tanàna na ny ranomasina sira harafesiny amin'ny faritra amoron-tsiraka, dia azo ampiasaina tsy misy ahiahy, mba hamahana ny fikojakojana. manahy.
Ny vokatra azo ampiharina sy haingon-trano, dia azo ampiasaina amin'ny tokantrano fianakaviana, tokotany, aza *, orinasa, andrim-panjakana, kaominina, zaridaina ivelan'ny rindrina fefy. Azo namboarina araka ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ny vokatra dia vita amin'ny vy mafana fanitso, izay manana harafesiny mafy fanoherana, mari-pana ambony fanoherana, hamandoana tsara sy ny hafanana fanoherana, ambany fepetra takiana, fanompoana ela velona, ​​maitso sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny vokatra dia azo namboarina araka ny filana ny haavon'ny vokatra sy ny sakany. Azonao atao koa ny misafidy ny loko mifanaraka amin'ny safidinao.